Maitiro ekuve akangwara ▷ ➡️ Ziva Pamhepo ▷ ➡️
7 Kuverenga Min
Kuva vakangwara. Ungwaru inyanzvi yepfungwa inotitendera kuchinjira kumamiriro ezvinhu nenzira yakanaka. Kuti tive nekunzwisisa kuri nani kwechokwadi, zvakafanira kudzidza uye kufunga kuitira kuti tikwanise kuita sarudzo dzakanakisa. Nokuda kwechikonzero ichi zvakakosha gadzira njere dzedu.
Nekudaro, sekune mamwe masimba, Zvinotora nguva nesimba kuti tiwedzere njere dzedu.ku. Hazvibviri kuve nehungwaru kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera, asi nekutsunga, chero munhu anogona kuzviita.
Funga kuti pane zvimwe miitiro yakapfava yaunogona kusakurira kuita sarudzo nekukurumidza uye nemhando iri nani. Saka mubvunzo ndewekuti, chii chandinofanira kuita kuti ndive nenjere? Kubva Ziva.online , tichakupa mazano ekuti, kana ukaashandisa, achakubatsira kuti uzviite.
1 Nzira yekuve yakangwara: mazano anobatsira
1.1 1. Funga nezvepfungwa itsva zuva nezuva
1.2 2. Verenga pepanhau
1.3 3. Tsigira pfungwa dzinopesana nedzauinadzo kare
1.4 4. Verenga chitsauko mubhuku
1.5 5. Ona mavhidhiyo anodzidzisa pane kuona terevhizheni
1.6 6. Nyorera kune zvinyorwa zvemashoko nemashoko anofadza
1.7 7. Shanyira manyuko ako aunofarira ezivo
1.8 8. Govera vamwe zvawakadzidza
1.9 9. Nyora pasi zvaunoda kudzidza
1.10 10. Nyora mazita emabasa akapedzwa
1.11 11. Tanga urongwa hwezvinhu zvaunofanira kurega kuita
1.12 12. Nyora zvaunodzidza
1.13 13. Kurudzira pfungwa dzako
1.14 14. Tora zvidzidzo zvepaIndaneti
1.15 15. Taura nevanhu vaunoona vachifarira
1.16 16. Dana nevanhu vakangwara kukupfuura
1.17 17. Tevedzera mibvunzo yako
1.18 18. Shandisa Mashandisirwo eShoko
1.19 19. Buda munzvimbo yako yekunyaradza
1.20 20. Ongorora nzvimbo itsva
1.21 21. Tamba mitambo yakangwara
1.22 22. Wana nguva yekusaita chinhu
1.23 23. Ita basa rinoshanda
1.24 24. Shandisa zvawadzidza
1.25 25. Rovedza muviri uye idya kudya kunovaka muviri
Nzira yekuve yakangwara: mazano anobatsira
1. Funga nezvepfungwa itsva zuva nezuva
Fungidzira nezve nzira yekudzikisa hurombo, kugadzirisa dambudziko rezuva nezuva raunaro, mazano anonakidza emafirimu matsva, chero chinhu chinokukurudzira ku "ipa kokonati".
Hazvina mhosva kuti pfungwa dzako dzakaiswa mukati memusoro upi, chero bedzi shandisa pfungwa dzako, kusiya iyo yakasimba uye yakadzama pfungwa. Ndiani anoziva, inogona kushanduka kuita chirongwa chebhizinesi.
2. Verenga pepanhau
Tsika iyi inokubatsira ziva nezve zvese zvakakosha uye zvinoenderana nezvinoitika mukati nyika zvakakupoteredza. Nokuverenga nhau, unodzidza gadzira maonero ako uye ita hukama pakati pemisoro sezvinei hazvina hukama. Inzira huru yekuve munhu ane njere uye ane tsika.
3. Tsigira pfungwa dzinopesana nedzauinadzo kare
Tora chimwe chinhu chauchangobva kudzidza uye taura pfungwa yaisazova pachena kwauri panyaya yacho. Edza kutsvaga humbowo hunotsigira maonero ako uye uve wakasununguka kune mukana wekuti humbowo hutsva huchachinja maonero ako. Dzokorora nzira iyi zuva nezuva uye ichavandudza kugona kwako kufunga kunze kwenzvimbo yako yekunyaradza.
Kana uchinzwa wakamira edza kuverenga nekutsoropodza zvinyorwa zvepepanhau. Vanogona kukubatsira kunzwisisa kuti vamwe vanhu vanogadzira sei nharo uye kutaura zvavanofunga.
4. Verenga chitsauko mubhuku
Edza kuverenga bhuku rimwe pavhiki. Unogona kugara uchiwana nzvimbo diki dzenguva zuva rese kuti uverenge, ungave uri munzira kuenda kubasa kana wakamirira bhazi.
ari mabhuku emanyepo Iwo akanakira kunzwisisa mavara uye kunyudzwa mune imwe maonero, nepo asiri emanyepo ari akanakisa kukuzivisa iwe kune mitsva mitsva.
5. Ona mavhidhiyo anodzidzisa pane kuona terevhizheni
Dzimwe nguva zvinonakidza ona mashoo pamusoro penyaya yaunoda pane kuverenga nezvayo, uye unogona kudzidza zvakawanda kubva pane zvakaitika kune vamwe vanhu. Unogona kuona tutorials paYouTube. Mumavhidhiyo, ruzivo runowanzo kuratidzwa nenzira yekudya uye isingakanganwiki.
Iwe unogona kusakwanisa kuramba chido chekuona mafirimu, asi kana uchikwanisa, iyi inzira yakanaka yekuwana njere nekukurumidza.
6. Nyorera kune zvinyorwa zvemashoko nemashoko anofadza
Tevera mafaera anonakidza paFacebook, Twitter uye LinkedIn kuti ugare uchidzidza chimwe chinhu chitsva paunotarisa chikafu chako.
7. Shanyira manyuko ako aunofarira ezivo
Edza shanyira mablogi enyanzvi pane misoro yekufarira uye nzvimbo dzekutsvagisa dzinovhara nyaya dzaunofarira mazuva ese.
8. Govera vamwe zvawakadzidza
Iko hakuna nzira yekuwana hungwaru zuva rega rega pasina kupanana ruzivo! Kana muine mumwe munhu wokukurukura naye nokukurukura naye mazano, munogona kuwedzera ruzivo kune vamwe pamwe nekuwana maonero matsva. Uyewo, nokutsanangurira mumwe munhu pfungwa, zvinoreva kuti wagona chidzidzo chacho zvakakwana zvokuchipa.
9. Nyora pasi zvaunoda kudzidza
Sarudza zvaunoda kudzidza, unganidza zvinyorwa zvinokudzidzisa unyanzvi ihwohwo, uye anoshanda pane chimwe nechimwe chazvo mazuva ose.
Somuenzaniso, kana ukashanda mukambani yezvigadzirwa zvemichina, ungada kudzidza nezvemhando dzakasiyana dzepurogiramu (Java, SQL), kuitira kuti ugone kupedza zuva rimwe uchidzidza zvose nezveJava uye rimwe zuva uchidzidza nezveSQL.
10. Nyora mazita emabasa akapedzwa
Tsika dzekuva nenjere
Pakupera kwezuva rega rega nyora murunyoro zviitwa zvawapedza uye zvinangwa zvawawana. Nokudaro, zvinobatsira kunzwa zviri nani pamusoro pezvawakaita, kunyanya kana uchinzwa wakaora mwoyo.
Iyi nhanho zvakare inokubatsira iwe kuona kuti kuedza kwako kwakabudirira sei uye kugadzirisa yako-yekuita runyorwa rwezuva rinotevera.
11. Tanga urongwa hwezvinhu zvaunofanira kurega kuita
Kuti ujekese pfungwa dzake, cherechedza zvinhu zvose zvisina basa pamashandisiro aunoita nguva yako. Bvisa maitiro echinyakare, gadzira maitiro matsva uye ari nani.
12. Nyora zvaunodzidza
Unogona kutanga blog, kushandisa app, kana kunyange kabhuku kunyora pasi zvese zvawakadzidza. Pamusoro pekuve nzira yakanaka yekuenderana nezvese zvauri kuita, inogona zvakare kuve yakanaka sosi yekukurudzira. Iwe uchada kudzidza zvakawanda kana iwe uchiziva kuti, pakupera kwezuva, iwe uchafanirwa kunyora pasi zvaunoziva.
13. Kurudzira pfungwa dzako
La kuita basa remazuva ose inzira yakanaka yekuisa oxygen muuropi hwako uye kuchengetedza hutano hwako hwepfungwa. Zvakare inokubatsira kufunga kuburikidza nesarudzo dzakaoma kana kugadzirisa ruzivo rutsva. Ukuwo, itsika iyoyo inoburitsa endorphins mumuviri, zvichiita kuti ufare.
14. Tora zvidzidzo zvepaIndaneti
Iri ndiro rimwe remazano akanakisa ekuti uve nehungwaru! Usanyanya kuzvipira, tora kosi kana maviri kuti uve nechokwadi chekuti unogona kuzvichengeta. Nemakosi epamhepo, iwe unoziva kuti uchave nezviitiko zuva rega rega, ndizvo zvazviri nyore kujairana nemaitiro ako.
15. Taura nevanhu vaunoona vachifarira
Taura nevanhu vanoita sevanonakidza kwauri
Kunyange kana usingavazivi, usatya kuswedera pedyo navo. Bvunza nezvezvavanofarira uye kuti vakasvika sei ikoko. zvinogoneka dzidza zvakawanda kubva kuvanhu vatisingazivi.
16. Dana nevanhu vakangwara kukupfuura
Mazano echokwadi ekuti ungaita sei kungwara: kupedza nguva yakawanda sezvinobvira nevanhu vakangwara. Zuva nezuva unofanira ita nhamburiko yekunwa kofi kana kufamba-famba nemumwe munhu anokukurudzira.
Nguva dzose zvininipisa uye chido chokudzidza. Bvunza mibvunzo yakawanda. Kana wakapoteredzwa nevanhu vanoziva kupfuura iwe, hauzovi nechisarudzo kunze kwekudzidza zvakawanda.
17. Tevedzera mibvunzo yako
Kana iwe ukaona kana kunzwa chimwe chinhu chinonakidza, usarega nguva yacho ichipfuura. Iva neshungu uye uwane mhinduro kumubvunzo wako. Shure kwezvose, nzira yakanakisa yekuve wakangwara kutsvaga ruzivo. Saka iva munhu zvakanyanya kuda kuziva, gara uchibvunza uye tsvaga. Mukuwedzera, mazuva ano izvi zviri nyore, sezvo ruzivo rwuri muchanza chemaoko edu.
18. Shandisa Mashandisirwo eShoko
Rudzi urwu rwekuita runobatsira vandudza mazwi ako uye kuita kuti uwedzere kutaura mukudyidzana kwenyu kwezuva nezuva. Unogona kunyange kuedza dzidza mazwi matsva mune mimwe mitauro. Mazuva ese, edza kuwedzera mazwi mashanu kusvika gumi kumazwi ekunze kuti uri kuedza kudzidza.
19. Buda munzvimbo yako yekunyaradza
Kusiya nzvimbo yedu yekunyaradza nguva dzose kunoita kuti tive vakachenjera. Zvisundidzire zvishoma zuva nezuva. Edza kutaura paruzhinji, kutumira chikumbiro kune vaunoshanda navo kubasa, kana kuedza kusvika kune mumwe munhu waunoyemura kuburikidza neemail kana meseji.
20. Ongorora nzvimbo itsva
Kana usingakwanise kufamba kazhinji, edza kutsvaga zvinhu zvitsva muguta rako. Iwe uchasangana nevanhu vakasiyana, dzidza chokwadi chitsva, uye kunzwisisa chimwe chinhu chitsva pamusoro penyika. Zvinobatsira zvikuru kupfuura kugara pamba uchiona terevhizheni.
21. Tamba mitambo yakangwara
Mimwe mitambo yakaita sechess kana sudoku inowedzera pfungwa dzako. Zvadaro, zvipikise paunenge uchitamba. Semuenzaniso, tamba macrosswords pasina duramazwi. Saka iwe unogona zvakare kubheja pamapuzzle uye Sudoku.
22. Wana nguva yekusaita chinhu
Wana nguva yekusaita chinhu
Dzimwe nguva kugara wakanyarara kunogona kubatsira kukurudzira uye kufungisisa nezvezuva rako. Nguva yekuzorora yakakosha pakusimudzira zvakare. Nenzira iyi, iwe unogona kuve nekumwe kurongeka kwemifungo kana iwe uchifanira kushanda uye / kana kudzidza.
23. Ita basa rinoshanda
Kana iwe ukaita chimwe chinhu chaunogona kushanda pachiri zuva rega rega, senge kuruka, kuridza chiridzwa kana kuverenga, unogona kudzidza zvakanyanya nekushingaira nekungozviita. Semuenzaniso, ungada kuridza rwiyo rutsva mazuva ese, kuverenga bhuku refizikisi, kunyora mapeji mashoma enovhero, kana kudzidza hunyanzvi hwekombuta.
24. Shandisa zvawadzidza
Kana iwe uchangobva kudzidza kodhi nyowani kana kuridza chiridzwa, iva nechokwadi chekushandisa hunyanzvi uhu kazhinji muhupenyu hwako. Imhaka yekuti kudzidza nekuita ndiyo imwe yenzira dzinoshanda dzekuva vakangwara. Shure kwezvose, tsika ndiyo chete 100% inoshanda nzira kuti uwane zvakanaka pane chimwe chinhu.
25. Rovedza muviri uye idya kudya kunovaka muviri
Sarudza zvokudya zvinodyisa pfungwa dzako, dzivisa doro uye zvokudya zvinorema zvinokuita kuti unzwe hope. Kana wava nesimba, famba-famba. Kana ropa rakawanda richitenderera muuropi hwako, rinoita zviri nani. Vafungi vakuru vakaita saMahatma Gandhi naCharles Darwin vaive nemukurumbira nekufamba kwavo kwakareba.
Kubva Ziva.online Tinovimba kuti chinyorwa ichi chave chinobatsira kwauri. Kana iwe zvino uchida dzidza kuva netsitsi, ramba uchivhura webhusaiti yedu.
Kuti uwedzere kukwezva sei